पत्रकार महासंघकाे चुनाव : ‘जता काफल पाक्यो, उतै चरी नाच्यो’ ! - Kantipath.com
“पत्रकारिता बर्वाद गर्ने झुण्डको मतियार नबनौःसक्षम नेतृत्व चुन्न अर्थपुर्ण विवेकको प्रयोग गरौँ”
नेपालका पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासंघकाे चुनाव यही २५ गते हुँदैछ । चुनाव नजिकिएसँगै देशभर चहलपहल बढेको छ ।
त्यसो त सधै अरुको सूचना र समाचार दिने पत्रकार यतिबेला आफ्नो समाचार र सूचना दिनमै केन्द्रित छन् । हुन पनि किन नहोस् पत्रकारको त चुनाव ! अरुको भन्दा बढी सुचना र समाचार त आउने नै भयो ।
अझैपनि मिडिया हाउसहरुमा व्यवस्थापनले विभिन्न बाहानामा पत्रकार र मजदुरलाई निकाल्ने गरेको छ । कोरोनाको समयमा त झन यसले भयावहरुप लिएको हामि सबैलाई थाहा नै छ । त्यसो त ठुला मिडियाहाउसका रूपमा कहलिने गरेका कतिपय मिडियाबाट दर्जनौ भन्दा बढि पत्रकारले सामूहिक राजिनामा दिने गरेको हाम्रो आखाँ अगाडिका उदाहरण हुन् । भित्रिभित्र हाम्रा आखाँले देख्न नसकेका र कानले सुन्न नपाएका विषयहरु कति होलान जुन आफैँमा सोचनिय पाटो हो ।
राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तिका लागि पत्रकारिताका मुल्य मान्यताहरु हराउँदै गएका छन् । स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभाव हुँदै गएको महसुस भएको छ । नेपालको समग्र नीतिमै हस्तक्षेप गर्ने स्वतन्त्र नेपालको प्रेसमा पनि हावी भएको प्रशस्त उदाहरणहरु भेटिन्छन । संगठित हुन पाउने पत्रकारको पनि अधिकार हो ।
दलिय पत्रकारहरुबाट निश्पक्ष समाचार सम्प्रेषण हुन्छ भन्नु बालुवाको घर बन्छ वा तातो पानीले डढेलो लाग्छ भन्नु जस्तै हो । तर सबै पत्रकारहरु दलको झुण्ड पक्कै पनि होइनन् । दलगत, दलभित्रको पनि गुटगत वा व्यक्तिको ढोँगीकारिता गर्ने पत्रकारहरुको भिडमा सुसुप्त देखिछन् । खासमा पत्रकारिताको ज्ञान नभएको अवस्थामा उ पत्रकार हुन नपाउने हो तर यहाँ त पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेमात्र पनि पत्रकार भइहाल्ने परिपाटी छ । जसले स्वतन्त्र पत्रकार र देश र समाजको लागि केहि गर्न चाहने पत्रकारहरुलाई थिचोल्दै गएको छ । अव हामी प्रस्ट हौ कि हाम्रा मत के का लागी ? कस्ताका लागी र किन ?
नेता होईन निती हेरेर भोट गरौ । पत्रकार भनेको एउटा पद हो । त्यो पदमा आउने महिला÷पुरुष, जातभात र लिङ्गको आधारमा नभएर सक्षम ब्यक्ति हुनुपर्छ । पहिचान भनेको पदले झल्काउने कुरा हो । तसर्थ विवेकपूर्ण निर्णय गरौ । पद्धती, पादर्शिता, इमान्दारिता र उत्कृष्टता अबको नेतृत्वको आवश्यकता हो । देश संमृद्ध र नागरिक सचेत भएका देशमा राजनीतिको रङ लगाउनु पर्दैन । आफ्नो अमूल्य मत कसैको लोभ, डर, त्रास र धम्कीमा नपरी स्वतन्त्ररूपमा विवेकपूर्ण निर्णय गरेर गरौँ ।
Previous Previous post: एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दै : कर्णाली सरकारको टाउको माथि तरबार
Next Next post: भारतबाट आएका ३ जनामा देखियो नयाँ प्रकारको कोरोना